I-Ogmore By Sea Studio Flat imizuzu emi-5 ukusuka ebhishi - I-Airbnb
I-Ogmore By Sea Studio Flat imizuzu emi-5 ukusuka ebhishi
I-Stunning Studio Flat Overlooking Beach On Welsh Coastal Path.I-Ogmore yaziwa ngokushona kwayo okumangalisayo nokuphuma kwelanga. Ipharadesi labatshuzi elinezindunduma zesihlabathi ezinkulu kunazo zonke eYurophu ngaphesheya komfula e-Merthyr Mawr.
Izitolo eziningi zasendaweni ezisezingeni eliphezulu, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela, kanye nemizuzu eyi-10 kuphela ukuya eBridgend, enenxanxathela yezitolo iMcarthur Glen enhle kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi shayela imizuzu eyi-15 ukuya edolobheni lemakethe elimangalisayo laseCowbridge kanye nokuhamba imizuzu engama-30 kuphela ukuya eCardiff.
Ubumfihlo obugcwele efulethini lesitudiyo eziqukethwe ngokwakho. Ngaphansi kwemizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo ukuya ogwini .Izindawo zokudlela ezinhle zasesigodini nezindawo zokudlela kanye nesitolo esihle sase-Village kanye neposi.